Umhlahlandlela Wamabhizinisi Amancane Wokuxhumana Kwezenhlalo | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Agasti 30, 2013 Douglas Karr
Angikakholwa namanje ukuthi wonke amabhizinisi akulungele ukutshala imali kucebo lezokuxhumana. Kunezinkampani ezinjenge-Apple ezinemikhiqizo engakholeki, ukukhangisa okumnandi, nemikhiqizo emihle eqhuba ukumaketha ngomphakathi wabo abasebenzisi. I-Apple ayidingi ukuthi isebenze ezinkundleni zokuxhumana ukuze iphile futhi ichume. Ezinye izinkampani ziseceleni okuphambene kwesikali, ngezinsizakalo zamakhasimende nezinkinga zokwaneliseka kwamakhasimende. Ukugwema imithombo yezokuxhumana kungaba isu elihle kuze kube yilapho belungisa izinqubo nemikhiqizo yabo.
Kepha, enkampanini efisa ukuthatha isabelo semakethe, yakha igunya, yakhe ithonya futhi ikhulise ibhizinisi labo, imithombo yezokuxhumana iyindlela ephansi, enamandla amakhulu yokwenza lokho. Ngithi high umzamo ngoba kudinga isikhathi nokuzinikela okuvela kuwe nethimba lakho ukukhiqiza okuqukethwe futhi kunikeze inani lokukhulisa izithameli zakho nokwakha umphakathi. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi kumabhizinisi amancane angenayo imithombo yemali 'yokuthenga' ukukhangisa okudingekayo ukuze kukhule.
Imithombo yezokuxhumana ibaluleke kakhulu ohlelweni lokukhangisa lwebhizinisi elincane! Umbuzo ophikelelayo uthi: "ibhizinisi lakho lingazuza kanjani kakhulu ekumaketheni kwezokuxhumana?". Thola ku-The Small Business Guide to Social Media Mastery, i-infographic entsha sha elethelwe yona ngu- IMarketMeSuite futhi Izindawo!
Siza I-Scout: Faka Insizakalo Yamakhasimende Engahluziwe Esizeni Sakho